Chọpụta obodo ndị kachasị mma n'ụsọ mmiri Portuguese | Bezzia
Obodo mara mma nke dị n'ụsọ oké osimiri Portuguese
Susana Garcia | 19/05/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
Portugal bụ obodo nwere ọtụtụ amara, na ịrịba ọdịnala na ọtụtụ kilomita nke ala gbara osimiri okirikiri na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma iji nọrọ n'oge okpomọkụ. E nwere mpaghara ala ndị ọzọ na-ewu ewu, dị ka nke dị na Algarve, mana ọ nwere ọtụtụ ihe ịchọpụta, dịka ụsọ oké osimiri ugwu na obodo ya yiri nke Galicia ma ọ bụ mpaghara etiti, ebe anyị na-ahụ ndị njem nleta na nke ọma- mara ebe.
Anyị ga ahụ ụfọdụ n'ime ọmarịcha obodo anyị nwere ike ịga ọ bụrụ na anyị na-eme njem n'akụkụ ụsọ mmiri Portuguese. Ala mmiri a nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma na-anya ụgbọala yana ọ bụ nnukwu echiche. Ọ bụ otu n'ime njem kachasị mma na Portugal.
Viana do Castelo bụ otu n'ime ebe ndị bụ isi iji gaa na ụsọ oké osimiri ndị dị na Portuguese. Obodo a nwere osimiri ma o nwekwara ọtụtụ ebe ị ga-ahụ. N'elu a ugwu anyị nwere ike ịhụ ụka Santa Luzia, a peculiar ụlọ na a square plan nke nwere ikpọ echiche nke oké osimiri na obodo. Ozugbo ị nọ n'obodo, ị nwere ike ịga n'ọdụ ụgbọ mmiri iji hụ ụgbọ mmiri Gil Eanes, ụgbọ mmiri ụlọ ọgwụ ochie ebe ị nwere ike ịhụ arịa ụlọ ha ji. Na Viana do Castelo, anyị nwekwara ike ịga na ebe ngosi nka chọkọleti.
Obodo nta a dị na mpaghara Porto ma bụrụ ebe a raara nye ịkụ azụ. N'ime obodo anyị nwere ike ịhụ otu n'ime ebe mgbago ugwu dị na mgbago ugwu, amaara dị ka ebe e wusiri ike nke Nossa Senhora de Conceiçao. Otu n'ime ihe ndị a pụrụ ịhụ bụ Iglesia da Lapa, obere ma nwee ọtụtụ amara. Na nso ebe ewusiri ike, anyi huru ihe ncheta nke nwanyi azu. Ndị bi na ya taa nwere ọtụtụ njem nlegharị maka osimiri ya.
Ọnụ ọgụgụ ndị Aveiro bụ amara dị ka Portuguese Venice maka ọwa mmiri ya, nke e jiri maka azụmaahịa n'oge gara aga. Moliceiros bụ ụgbọ mmiri ndị mara mma nke na n'oge a, ha na-atọ ndị njem nleta ụtọ site n'ịkpọga ha n'ọwa mmiri. Obodo nwere ọmarịcha ihu. Anyị nwekwara ike ịhụ Aveiro Museum nke dị na Convent Jesus na Catedral da Sé de Aveiro. Na mpaghara a, ịkwesighi ịhapụ osimiri Costa Nova na Barra.
Nke a bụ otu n'ime ebe kachasị njem nlegharị anya n'ụsọ osimiri Portuguese. Figueira da Foz nwere osimiri mara mma ma saa mbara dị ka praia da Caridade. N'ime ebe a, anyị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ mgbidi dịka Buarcos na Santa Catarina. N'etiti obodo bụ Obí nke Sotto Mayor, ụdị French na ubi ndị mara mma. Casinolọ cha cha bụ ihe ọzọ dị mkpa nke na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta.
Nke a bụ ụlọ mara mma ọzọ mara mma ileta. N'ahịa obodo anyị nwere ike ịhụ ụdị nri niile na ogige Visconde da luz bụ ebe ị ga-aga n'etiti obodo ahụ. Ihe emegharị emegharị na ụsọ mmiri da Rainha ma ọ bụ da Ribeira bụ ihe ndị kasị adọrọ mmasị. Anyị ga-efunahụ n'obodo ochie ya wee hụ, dịka ọmụmaatụ, Seixas Obí ma ọ bụ ebe ochie ewusiri ike.
La Ndị Lagos dị na mpaghara Algarve, n’ebe ndịda nke Portugal. Nke a bụ otu n’ime ihe ndị kasị touristic ebe na Portugal. Ugwu Ponta da Piedade mara ezigbo mma na oghere okike nke a na-aghaghi ihu. Na mpaghara a nwekwara Meia Praia, otu n'ime osimiri kachasị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Obodo mara mma nke dị n'ụsọ oké osimiri Portuguese
Aghụghọ iji nweta ahụ ike
Etu ị ga - esi nwee ezigbo ụkwụ